“Waxaan ku Baaqayaa in Baadhis Qoto-dheer lagu Sameeyo Biyo Ballaadhinta Hargeysa” Xildhibaan Dayib – somalilandtoday.com
“Waxaan ku Baaqayaa in Baadhis Qoto-dheer lagu Sameeyo Biyo Ballaadhinta Hargeysa” Xildhibaan Dayib
(SLT-Hargeysa)-Xildhibaan Dayib Xasan Axmed, oo ka mid ah mudanayaasha golaha guurtidda Somaliland, ayaa madaxweynaha qaranka Somaliland u soo jeediyay in uu si qoto dheer baadhis ugu sameeyo caqabadaha heysta mashruuca biyo ballaadhinta caasimadda Hargeysa.
Xildhibaanku waxaa uu sidaasi ku sheegay mar uu shalay warbaahinta kula hadalayay gudaha magaalada Hargeysa, isaga oo ugu horreyn arrimahaasi si faahfaahsan uga hadlayayna waxa uu yidhi “Inta mashruucan biyo gelinta Hargeysa laga shaqeynayay waa dawladdii saddexaad. kuwii hore waxba hirgelin waaye, Insha Allah madaxweynahan jagadda madaxtinimadda haya ee Muuse Biixi Cabdi in uu arrintaasi aad uga shaqeyn doono, Ayaan aaminsanahay.”
Xildhibaan Dayib Xasan Axmed, waxa uu intaasi raaciyay “Mudane madaxweyne biyahani qandaraaskooda waxa qaadatay shirkadd Itoobiyaan ah. Xunbaweyne shirkad ayaa wadday, mashruucanna kuwan ayaa waday, ee madaxweyne saddex dawladood oo kala dambeeyay ayuu mashruucani socdaaye ee waxa jira ha la ogaado, musuqmaasuq baa ku jira, musuqmaasuquna waxaa uu ka jiraa shirkadda qandaraaska la sii siiyay iyo ta Itoobiyaanka ah, labadaasi dhexdooda ayuu ka jiraa, sababta oo ah haddii aanu jirin saddex dawladood biyaha Hargeysa lama dooneen oo lama yidhaaheen biyaa Hargeysa la keenayaa.”
Xildhibaan Dayib waxa uu madaxweynaha ugu baaqay in sida uu daba-galka ugu hayo hantidii ummada ee luntay, in uu biyo ballaadhinta caasimadda Hargeysana qorshaha ugu darsado, waxaanu yidhi “Madaxweyne maadaama oo aad heyso jagada madaxtinimo ee wadanka, si qoto dheer inaad ula socoto oo biyaha waxa heysta aad baadho ayaanu u baahannahay oo danti guud ee ummadu laheyd ba aad soo celinteedii imika waddo oo aad ka shaqaynayso,mudane madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa in aad arrintaa baadho, si inta aad heyso jagadda madaxtinimo ee wadanka ay magaalada Hargeysi biyo u hesho, adigana ay sharaf kuugu noqoto, si qoto dheer u daba gal oo arrintaa mihiimadda koobaad hala siiyo.”